Ovao haingana ny lokon'ny volo amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Pablo Gondar | | Photoshop, Cheats, Tutorials
Ovay ny lokon'ny volo Photoshop fomba mahaliana io zahao ny fomba ananantsika fomba iray nefa tsy mila mandalo ilay mpanao volo Araka izany, mitahiry kely ary manamarina raha toa tsara na ratsy ny fomba vaovaontsika. Te hahafantatra ny volon'ny volon-doko hafa ve ianao? Noho ireo karazana hafetsena ireo dia afaka mamonjy aretin'andoha be ianao ary tsy tokony hanimba be ny volonao.
Mianara fomba mahaliana ovay ny lokon'ny volo misaotra Photoshop Fitaovana mahafinaritra an'i Adobe amin'ny famoronana karazana tetikasa sary mamorona. Mianara mampiasa ny fototry ny programa ary apetraho amin'ny fampiasana mahaliana ho prototype ho an'ny volom-bolo vaovao. Mamorona firaketana mahaliana fa afaka miasa ho modely izy ireo mba hahafahan'izy ireo manao izany amin'ny ho avy amin'ny mpanao taovolo, zahao raha tianao io loko vaovao io.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika raha te hanova ny lokon'ny volontsika isika dia mitady sary tsara izay azo ampiasaina amin'izany, atoro anao fa manana kalitaon'ny jiro tsara ny sary mba hankasitrahana bebe kokoa ny antsipirian'ny loko. Azontsika atao ny mitady ao amin'ny Internet raha mila referansa manampy hanome aingam-panahy anay.
Raha vantany vao manana ny sary isika, ny zavatra manaraka ataontsika dia ny manokatra azy io Photoshop manomboka miasa.
Miaraka amin'ny sary ao amin'ny Photoshop, ny zavatra manaraka hataontsika dia ataovy ny sosona ny sarinay ary mamorona a fanitsiana sosona / saturation hue (sosona iray isaky ny loko).
Ny fandidiana ity fitaovana ity dia tsotra, ampiharintsika ny loko tadiavinay manova ny masontsivana sosona fanitsiana, hamita avadika ny sosona miaraka amin'ny hitsin-dalana fifehezana + i. Amin'ity dingana farany ity dia vitantsika ny manafina ny loko amin'ny sary iray manontolo, avy eo ny faritra volo ihany no hosodinay.
Manohy mamorona sosona fanitsiana hue saturation amin'ny loko tadiavinay izahayRaha vantany vao vita isika, ny zavatra manaraka hataontsika dia ny fanomezana anarana ny sosona amin'ny loko (asaina miasa amin'ny fomba milamina). Raha marina ny zava-drehetra dia tokony hanana valiny sahala amin'ilay sary eto ambany isika.
Ny zavatra manaraka hataontsika dia ny fanombohana lokoy ny sarinay mamela ireo sosona izay noforoninay teo aloha hiasa amin'ny faritra manokana amin'ny fampiasana ny borosy. Miaraka amin'ilay borosy dia hanomboka hanamboatra mangarahara ireo sosona isika, mba hanaovana an'io dia mila mandeha any amin'ny tsirairay amin'ireo sosona fotsiny isika ary manomboka mamaky azy io. Ny tsara indrindra, ny miasa miaraka amin'ny borosy dia ny fanovana ny soatoavina: opacity, flow, hardness.
Afaka minitra vitsy dia azonao atao ny manova ny lokon'ny volonao ary zahao raha toa anao tsara na tsia ilay fomba tena tianao. Mikaroha, alao sary an-tsaina, manaova fanazaran-tena ary aza atsahatra ny fanandramana amin'ity ody antsoina hoe majika ity Photoshop.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ovao ny lokon'ny volo amin'ny Photoshop